China Half Circle cradle plant support Manufacturer and Supplier |Ọwụwa Anyanwụ Yilong
Nkwado osisi okpuru ulo
Ogige nkwado osisi,
Ọkara gburugburu metal ubi osisi na-akwado,
mgbanaka nkwado ihe ọkụkụ,
Nkwado oke ala,
Ihe mgbanaka ihe ọkụkụ maka Rose
Okooko osisi Vine Ime ụlọ
Koodu ihe W x H
YL-7205 40x35 cm;40x70 cm;40x100 cm
Enwere ike ịhazi nha ya.
Ụdị dị iche iche maka nhọrọ gị.
Agba: Ogologo oge na agba agba: Ejiri ígwè na mkpuchi ntụ ntụ na-acha akwụkwọ ndụ, na-eguzogide ihu igwe, na-emegharị na ogologo oge, dị mma karịa osisi.Ọdịdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-enyere aka ịgwakọta n'ime osisi, dị ka ihe a na-adịghị ahụ anya, mara mma.
Size: Ogo nke ibe ọ bụla nke nkwado ihe ọkụkụ bụ 30cm, 70cm, 100cm ma ọ bụ ịdị elu ọzọ ịchọrọ.Biko lelee nha ugboro abụọ tupu ịzụrụ.Ụdị mgbanaka nkwado osisi dị mma maka tomato, ose, osisi ndị na-acha akwụkwọ ndụ, osisi ohia, orchid, roses, peonies, hydrangeas, salvias, okooko osisi cone na osisi vine dị ka ugu, kukumba, egusi, wdg.
Nkwakọ ngwaahịa: Ibe ọ bụla nwere akara mmado, mgbe ahụ 10pcs / katọn, ị nwere ike ikpebi iberibe otu igbe katọn.Pallet maka njem dị mma dị ka achọrọ.
Mgbochi mwepu nke igwe eji arụ ọrụ ugbo
Nkọdo n'osisi ụgbọ okporo ígwè YL-7505/YL-7506/ YL...
Tomato Cage Metal Garden Obelisk maka ịkọ ubi ...
Ji achọ metal Garden nsu mgbochi YL-7804
Ihe ndozi Ugboro abụọ Waya Panel Mkpuchi ntụ ntụ, 3d welded Panel nsu, Ọnụ ụzọ ámá efere e ji achọ mma, Austrịa Y Post, Bracket, Ọnụ ụzọ ámá ọkọlọtọ,